EPL:Arsenal oo ku barbaratay kooxda Watford kadib markii ay uga adkaadeen 4-gool +Sawirro – Gool FM
Liibaan Fantastic April 2, 2016
38 daqiiqo Iwobi ayaa hogaanka u sii dheereeyay Arsenal kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubadd uga timid saxiibkiis Sanchez wuxuuna ka dhigay ciyaarta 2-0.
Qaybtii hore ayaa lagu kala nastay 2-0 oo ay hogaanka ku haysay Arsenal.
Qaybtii dambe Arsenal oo soo bandhigtay mid kamid ah qaab ciyaareedkeedii ugu fiicnaa xiliciyaareed kan ayaa sii waday weerarka ay ku haysay goolka Watford oo isbuucyo ka hor ka reebtay koobka FA Cup-ka.
48 daqiiqo Bellerin ayaa hogaanka u sii dheereeyay Arsenal kadib markii uu shuud xoogan ku celiyay kubadd ay soo bixiyeen difaacyada Watford wuxuuna ka dhigay ciyaarta 3-0.
Dhamaadkii ciyaarta Arsenal ayaa heshay goolka 4-aad kadib markii Walcott uu shabaqa ku hubsaday kubadd uu Campbell si xirfadaysan ugu soo dhigay irida goolka wuxuuna ka dhigay 4-0.
Guushaan ayaa ka dhigan tii ugu horaysay ee Arsenal ay ku gaarto garoonkeeda 3-dii kulan ee ugu danbeeyay tartamada oo dhan.